ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: October 2009
ရွေ့ လျားနေသောလျှိူ့ ဝှက်ဆန်းကြယ်ကျောက်တုံးများ....
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အနောက်တောင်ဘက်ပိုင်း၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်နှင့် နီဗားဒါးပြည်နယ်
နှစ်ခုအစပ်၊ နယ်ခြားဒေသကြီးတွင်တည်ရှိသောသေမင်းတမန်တောင်ကြား ( Death Valley )
တွင် သဘာဝအလျောက်သူ့ အလိုလိုရွေ့ လျားနေသော အံ့ ဖွယ်ကျောက်တုံးများရှိနေသည်
ကမ္ဘာ့ သုတစွယ်စုံ အဘိဓာန် ၀ီကီပီးဒီယား၏အဆိုအရ ရွက်လွှင့်နေသော၊ ရွေ့ လျားနေသော
ကျောက်တုံးများမှာ လူသို့ မဟုတ် တိရိစ္ဆာန်များ၏ ထိခိုက်ရွေ့ လျားတွန်းထိုးသက်ရောက်မှုမပါ
ပဲ သူ့ အလိုလိုသာ ရွေ့ လျားနေခဲ့ ကြသည်မှာ စွပ်ကြောင်းကြီးများပင် အထင်းသာမြင်တွေ့ နိုင်
အခုလို ကျောက်တုံးများအလိုလိုရွေ့ လျားရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းအမှန်ကို မသိရှိရသေးပေ...
သို့ အတွက် ဘူမိဗေဒ ပညာရှင်များအတွက်သုတေသနပြု လေ့ လာစရာဖြစ်လာခဲ့ ရပေသည်...
ကျောက်တုံးများ၏ရွေ့ လျားရာ လမ်းကြောင်းနှင့် အကွာအဝေးများသည်လည်း တစ်ခုနှင့် တစ်
ခုမတူညီပဲ မကြာခဏပြောင်းလဲတတ်ကြသည်....တစ်ချိူ့ ကျောက်တုံးများက တစ်တုံးနှင့် တစ်
တုံး အစပိုင်းတွင် အတူတူယှဉ်ပြိုင်၍ ရွေ့ လာကြပြီးကာမှ တစ်ခုသောကျောက်တုံးက ရုတ်တစ်
ရက် ဘယ် သို့ မဟုတ် ညာဘက် သို့ ဦးတည်ချက်ပြောင်းရွေ့ သွားပြီးတစ်ခါတစ်ရံ လာရာလမ်း
ကြောင်းဘက်သို့ ပင် ပြန်လှည့် သွားတတ်ပေသည်...
ရွေ့ လျားသောအကွာအဝေးသည်ပင်လျှင် အရွယ်အစားတူ၊ သဏ္ဍာန်တူ ကျောက်တုံးနှစ်တုံး
အတူတူ တစ်ပြိုင်နက်ရွေ့ လျားနေကြရာမှ ကျောက်တုံးတစ်ခုကရုတ်တရက် ဖြတ်ကျော်တက်
သွားတတ်သလို တစ်နေရာတွင်လုံးဝရပ်တန့် နေရစ်ခဲ့ သည်လည်းရှိတတ်ပေသေးသည်....
သူတို့ ရွေ့ လျားသည့် နှုံးကလည်း အမျိူးမျိူးအပြောင်းအလဲ ရှိပေသေးသည်...မည်သူတစ်ဦး
တစ်ယောက်မျှ ထိုကျောက်တုံးများ ရွေ့ လျားသွားတာကိုမြင်တွေ့ ရသည်မဟုတ်သည့် အပြင်
မည်သူမျှလည်း ထိုကျောက်တုံးများကို ရွေ့ လျားစေသည်မဟုတ်သည့် အတွက် ကျောက်တုံး
များ မည်သည့် ရွေ့ လျားနှုံးဖြင့် ရွေ့ နေကြသည်ကို မည်သူမျှ မသိကြပေ....
ဘူမိဗေဒပပညာရှင် Jim McAllister နှင့်Allen Agnew တို့ ဟာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ အဆိုပါ
ကျောက်တုံးများရဲ့ ရွေ့ လျားရာလမ်းကြောင်းကိုရေးဆွဲမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါသည်....
အမေရိကန်နိုင်ငံ အမျိူးသားဥယျာဉ်ဌာနမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပညာရှင်များကနောက်
ပိုင်းမှာ ကျောက်တုံးတွေရဲ့ ရွေ့ လျားမှု လမ်းကြောင်းများကိုထပ်မံပြီးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ ကြသည်...
၎င်းနောက် Life မဂ္ဂဇင်းကြီးက အဆိုပါအကြောင်းအရာကို ဓါတ်ပုံများဖြင့် ဝေေ၀ဆာဆာဖော်
ပြခဲ့ သည်...အဆိုပါကျောက်တုံးများ ရွေ့ လျားရခြင်းအကြောင်းခန့် မှန်းပြောဆိုခြင်းများအဆို
ပါအချိန်မှ စတင်ခဲ့ သည်ဟုဆိုပါသည်.....မမြင်နိုင်သောစွမ်းအားစုများကအဆိုပါကျောက်တုံး
များကိုရွေ့ လျားအောင်ပြုလုပ်သည်ဟုဆိုသူများကဆိုသလို တစ်ခြားရှင်းမပြနိုင်သောအကြောင်း
သုတေသနပညာရှင်များဟာ ကျောက်တုံးတစ်ချိူ့ ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာ လေ့ လာစမ်းသပ်ခဲ့ ကြ
ပါသည်...သူတို့ လေ့ လာခဲ့ တဲ့ ကျောက်တုံး နှစ်ဆယ့် ငါးတုံးထဲက ဆယ်တုံးဟာ ပထမဦးဆုံး
ဆောင်းရသီမှာ မေရီအန်း (ကျောက်တုံးကိုနာမည်ပေးထားတာ ) Stone A အပါအ၀င် အလျား
ပေ ၂၁၂ ပေအထိ ရွေ့ လျားခဲ့ ကြပါသည်....
နောက်ထပ် ထပ်ပြီးလေ့ လာခဲ့ တဲ့ ဆောင်းရာသီခြောက်ခုထဲကနှစ်ရာသီမှာတော့ ကျောက်တုံး
တွေ ရွေ့ လျားတာကိုတွေ့ ရှိခဲ့ ရသည်...နွေရာသီမှာတော့ ကျောက်တုံးတစ်တုံးမှ မရွေ့ လျား
ပါဘူး...ဆောင်းရာသီမှာတောင်မှရွေ့ တဲ့ ကျောက်တုံးရှိသလို လုံးဝမရွေ့ တဲ့ ကျောက်တုံးတွေ
ခုနှစ်နှစ်ကြာ စူးစမ်းလေ့ လာသုတေသနပြုခဲ့ တဲ့ ကျောက်တုံးအလုံး ၃၀ မှာ နှစ်လုံးကလွဲလို့ 
ကျန်တဲ့ ကျောက်တုံးအားလုံး ရွေ့ လျားခဲ့ ပါတယ်တဲ့ ....
၂့ ၅ လက်မ အချင်းရှိတဲ့ နန်စီလို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ကျောက်တုံး stone H ကတော့ သုတေ
သနပြု လေ့ လာခဲ့ သမျှထဲမှာ အရွယ်အစားအသေးဆုံးပါပဲ...အသေးဆုံးမို့ သူဟာရွေ့ လျားမှု
စုစုပေါင်း ၈၆၀ ပေနဲ့ အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ တာပါ...ဆောင်းတွင်းတစ်ခုမှာကို ၆၅၉ ပေနဲ့ တစ်ရာသီ
အတွင်း ဝေးဆုံးရွေ့ လျားမှုလည်းဖြစ်ခဲ့ သည်ဟုဆိုပါသည်...
အကြီးဆုံးရွေ့ ခဲ့ တဲ့ ကျောက်တုံးကတော့ ပေါင် ရှစ်ဆယ် ( ကီလို ၃၆ ) လေးပါသတဲ့ ....
ကယ်ရင်လို့ အမည်ပေးခဲ့ တဲ့ ကျောက်တုံး stone J ကတော့ ၂၉ လက်မ ၁၉ လက်မ နဲ့၂၀
လက်မ အတိုင်းအတာ ရှိတဲ့ဒိုလိုမိုက်ကျောက်အမျိူးအစားဖြစ်ပြီး ခန့် မှန်းချေ ပေါင် ၇၀၀ လေး
ပါတယ်...( ကီလို ၃၂၀ ပေါ့) ....
သူ့ ကို လေ့ လာခဲ့ တဲ့ အချိန်အတွင်းမှာတော့ကယ်ရင် ဟာလုံးဝကိုမရွေ့ လျားခဲ့ ပါဘူးတဲ့ .....
သူ့ ရဲ့ ပေ၅၇၀ ကျော်စွပ်ကြောင်းအဖြောင့် ကြီးကတော့ တောင်ပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျခဲ့ စဉ်တုံးက
ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ တဲ့ အရှိန်ကြောင့် တစ်ခါတည်းရွေ့ လျားခဲ့ စဉ်တုံးကဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
ပြင်းထန်တဲ့ လေတိုက်နှုံးနဲ့ရေခဲတမျှအေးစက်မှုဟာလည်း အခုလိုကျောက်တုံးတွေရဲ့ထူးဆန်း
အံ့ သြဖွယ်ရာ အလိုအလျောက်ရွေ့ လျားစေမှုရဲ့အကြောင်းတရားလို့ လည်းဆိုကြပါသေးတယ်...
ဒါပေမယ့်အဲဒီယူဆချက်ဟာဖြစ်နိုင်ချေသက်သက် တစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်.....
ကျောက်တုံးတွေရွေ့ လျားရတဲ့ တစ်ကယ့် အကြောင်းအရင်းကတော့ အခုထက်ထိ လျှိူ့ ဝှက်
Posted by Unknown | at 10:02 AM |2comments
ဆိုမာလီနိုင်ငံမှ အသက် ၁၁၂ နှစ်ရှိအဘိုးအိုတစ်ဦးဟာ သူ့ ထက်အသက် ၉၅ နှစ် ငယ်သော
မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့် အကြင်လင်မယားအဖြစ်ပေါင်းသင်းရန် လက်ထပ်ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ပြီးတော့ သူက အဲဒီကလေးမလေးနဲ့သားသမီးများတောင်ရချင်ပါသေးတယ်တဲ့ ဗျာ....
သူ့ အတွက်ကတော့ မုတ်ဆိတ်ပျားစွဲတာပေပဲလားမသိ....
အသက် ၁၁၂ နှစ်ရှိပြီလို့ ဆိုတဲ့အဘိုးကြီး Ahmed Muhamed Dore နဲ့ သူ့ ရဲ့ သတို့ သမီး
အသက် ၁၇ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ကောင်မလေးတို့ ရဲ့ မင်္ဂလာဧည့် ခံပွဲကို ဧည့် ပရိတ်သတ်ရာနဲ့ 
ဆိုမာလီနိုင်ငံ၊ အလယ်ပိုင်း ဒေသမှာပြုလုပ်တဲ့အဲဒီလက်ထပ်ပွဲမှာ ဇနီးမယား ငါးယောက်နဲ့ 
သားသမီး ၁၈ ယောက် ရှိပြီဖြစ်တဲ့အဘိုးကြီးက သူရဲ့ နောက်ဆုံးဇနီး အသစ်စက်စက်လေး
Safia Abdulleh နဲ့ လည်း နောက်ထပ်ကလေးတွေရ ချင်ပါသေးတယ် လို့ ဆိုပါတယ်....
” ဒီနေ့ ဟာဖြင့် ကျွန်တော့် ဘ၀ရဲ့ အိပ်မက်တွေ တစ်ကယ်ဖြစ်လာအောင် ထာဝရဘုရား
သခင် ကကူညီစောင်မခဲ့ ပါပြီ....” လို့ သူက Galguduud မှာပြုလုပ်တဲ့ လက်ထပ်ပွဲ အခမ်း
သတို့ သမီးရဲ့ မိသားစုကလည်း ကောင်မလေးဟာ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲ ရှိနေ
သူ့ အသက်အရွယ်နဲ့ ဆိုသူ့ ရဲ့ မြေး၊ လောက်သာရှိသေးတဲ့ မိန်းကလေးကို ယူထားတဲ့ အဘိုး
အိုက သူတို့ နှစ်ဦးစလုံးဟာ ဆိုမာလီနိုင်ငံ တစ်ရွာတည်းမှာနေထိုင်သူတွေဖြစ်ပြီး သူ့ အနေ
နဲ့ကလေးမလေးအရွယ်ရောက်အောင် စောင့် ဆိုင်းနေခဲ့ တာပါလို့ဆိုပါတယ်...
Guriceel မြို့ မှာပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ အဆိုပါ လက်ထပ်ပွဲကတော့အာဖရိကတိုက်က နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်
တဲ့ ဆိုမာလီ နိုင်ငံရဲ့ နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ ချီတဲ့ ကာလအတွင်းမှာတော့ ပထမဦးဆုံးကျင်းပတဲ့အ
သက်အရွယ်ဒီလောက်ကွာခြားသူနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကညာပျိူနဲ့ ဇရာအိုတို့ ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲဖြစ်ပါတယ်....
”ကျွန်တော်သူမကို အတင်းအကြပ်လက်ထပ်ခဲ့ တာ မဟုတ်ပါဘူး...ကျွန်တော် သူမအပေါ်
ထားရှိတဲ့ မေတ္တာကို သူမနားလည်သဘောပေါက်ယုံကြည်လာအောင် ကျွန်တော့် ရဲ့ မိန်းမ
ကျမ်းကျေတဲ့ အတွေ့ အကြုံ တွေအသုံးချခဲ့ တာပါ...အဲဒါကို သူမ နားလည်ယုံကြည်လို့ လက်
ထပ်ခဲ့ တာပါ....” အဘိုးအိုက ဘီဘီစီသတင်းဌာန ကိုပြောပြခဲ့ ပါတယ်...“
သူ့ ရဲ့ လက်ရှိဇနီးနှစ်ယောက်နဲ့ သားသမီးများကလည်း သူအခုလို မိန်းမငယ်ငယ်လေး ထပ်
ယူတာကို သဘောတူကြပါတယ်...သတို့ သမီးရဲ့ မိဘတွေကလည်းသဘောတူခဲ့ ကြပါတယ်...
ဆိုမာလီနိုင်ငံတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးမိန်းမကလေးများကို အသက်အရွယ်ကြီးသူ အမျိူးသားများ
နှင့် ထိမ်းမြားလက်ထပ်လေ့ ရှိသော်လည်း ယခုကဲ့ သို့သေခါနီးသက်ကြားအို အဘိုးကြီးနှင့် 
လက်ထပ်တာမျိူးကတော့ ရှားပါတယ်တဲ့ ....
အဘိုးအို Dore ဟာ အသက် ၁၁၂ နှစ်ရှိပြီလို့ ဆိုပေမယ့်သူ့ မှာသက်သေပြစရာ အ
ထောက်အထား မွေးစာရင်းတော့ မရှိပါဘူး...
ယခုလက်ထပ်တဲ့ မိန်းကလေးဟာ အဘိုးအိုရဲ့ ဆဌမမြောက် မယားဖြစ်ပြီး သူ့ ရဲ့ ဇနီး သုံး
ယေက် ကတော့ သေဆုံးသွားခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါတယ်...
ဆိုမာလီနိုင်ငံမှာတော့အသက်ကြီးသူအမျိူးသားများနှင့်သူတို့ နှင့် စာလျှင် အလွန်အသက်
ငယ်သေးသည့် မိန်းကလေးများ လက်ထပ်ထိန်းမြားခြင်းဟာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါပဲတဲ့ ဗျာ...
Somalian, 112, marries teenage girl 95 years his junior... and plans to have children.
Posted by Unknown | at 10:08 AM |6comments
တက်ဂ်ထားတဲ့ ပို့ လေးဖြေပါပြီ...အကယ်၍သာကမ္ဘာများပျက်ခဲ့ ယင်တဲ့ ...
ရေးဆိုတော့ လည်းရေးပြီပေါ့ ....
ကျွန်တော့် ဘ၀ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ကိုယ့် ကိုယ်ကို ၊ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို၊မိသားစုကို...
စတဲ့ စွဲလမ်းနိုင်တာတွေအားလုံးကို မစွဲလမ်းမိအောင်သတိပေးနိုင်မယ့် ကျွန်တော်ကြည်ညိုတဲ့ 
ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေ၊ ( အများကြီးမဟုတ်ပါ...တစ်ပါးဆိုယင်တောင်လုံလောက်ပါပြီ....)
ပြီးတော့ ကျွန်တော်နဲ့ စိတ်သဘောအယူချင်းတူမျှတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဆို
ကျန်တာတော့ စွဲလမ်းနိုင်တဲ့ အရာ၊လူပုဂ္ဂိုလ်၊ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ အနားမှာရှိမနေစေ
ချင်ပါ...ရှိနေခဲ့ မယ်ဆိုယင်လည်းတိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ ပဲရှိနေစေချင်ပါတယ်...။
ကျန်းမာရေးကောင်းနေမယ်ဆိုယင်တော့ ဘာကိုမှ အထူးအထွေ ခံစားနေရမယ် မထင်ဘူး...
သေခြင်းသဘောကိုတွေးတောဆင်ခြင်နေမိမလားပဲ...ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သဘာဝ
တရားတွေကို အရှိအတိုင်းပဲ သတိလေးနဲ့ ဥာဏ်လေးနဲ့ ကပ်ပြီးသိနေချင်တယ်...။
ကိုယ့် ဘ၀ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ကို ကိုယ်ပြုခဲ့ တဲ့ ဒါန၊သီလကောင်းမှုတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးနေစေ
မလား၊ သတိပဌာန် ဘာဝနာနဲ့ ပဲ သတိကပ်ပြီးနေမလား ဆိုတာကတော့အဲဒီအချိန်မရောက်
ခင်အထိ ကြိမ်ဖန်များစွာကိုယ်ပြုခဲ့ တဲ့အလုပ်က စကားပြောမှာပါ...အခုအထိတော့ ဒါန၊သီလ
အမြတ်ဆုံးပန်းတိုင် အတွက်ကတော့ သတိဦးစီးတဲ့ စိတ်အာရုံစူးစိုက်မှု အလေ့ အကျင့် တရား
ဆိုတာသဘောပေါက်ထားပေမယ့်အချိန်ပေးပြီးမလုပ်ဖြစ်သေးပါ...မလုပ်နိုင်သေးပါ...
အဲဒီအချိန်အထိ လားရာဂတိမြဲတဲ့ အဖြစ်၊ ကျင့် ကြံအားထုတ်နိုင်သောခေတ်မှာ လူဖြစ်ခဲ့ လျှက်နဲ့ 
မကြိုးစား၊မကျင့် ကြံ၊အားမထုတ်ခဲ့ ရတာကိုပေါ့ ....ဒါကလောကုတ္တရာအပိုင်း...
အားလုံးဟာအချိန်တန်လျှင် ဒီလမ်းသွားရမှာမို့ ထူးပြီးတော့တော့ ဝမ်းနည်းမိမယ်မထင်...
ဒါမှမဟုတ်....သံယောဇဉ်အားလုံးကိုဖြတ်တောက်နိုင်သေးသူ မဟုတ်ခဲ့ ယင်တော့ ဝမ်းနည်းပူ
ရဟန္တာနဲ့ အနာဂမ်မဖြစ်သရွေ့ ကြောက်လန့် တတ်သေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းကြောက်လန့် 
နေမိဦးမှာပါ....တရားနှလုံးမသွင်းနေခဲ့ ယင်ပေါ့ ....
ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတဲ့ အရာအားလုံးကို သတိလေးနဲ့ သိနေနိုင်တဲ့ စိတ်
အလေ့ အကျင့် လေးပါ...ဖြစ်နိုင်ယင် မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ဓမ္မစာအုပ်အချိူ့ နဲ့ 
ဖားအောက်တောရ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ တရားတော် အသံတော်တစ်ချိူ့ လည်းနောက်ဆုံးအ
ချိန်မှာ ဖတ်ရှု နာယူချင်ပါသေးတယ်...
သတိမရှိတဲ့ အချိန်မှာတော့ တွေးမိတွေးရာတွေနေမိမှာပါပဲ... ကိုယ်ကချစ်တဲ့ သူ...ကိုယ့် ကိုချစ်
တဲ့သူ...ကိုယ်ပြုထားခဲ့ တဲ့ ကောင်းမှု၊မကောင်းမှုများ...အို...စုံလို့ စုံလို့ ... တွေးမိနေမှာကတော့ အများကြီးပါပဲ...ဒါပေမယ့် အဲဒီအတွေးတွေကိုဖြတ်ပြစ်ရမယ်.....ပစ္စုပ္ပန်အခိုက်လေးကိုပဲစိတ်ရှိနေ
ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးစိတ်ချမ်းသာအောင် အများကြီးမဟုတ်တောင် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ
ပြုစုလုပ်ကျွေးနိုင်ခဲ့ ပြီ...( သူကကိုယ့် ကိုပြုစုလုပ်ကျွေးလာတာကနှစ်တွေအများကြီးလေ...)
မိခင်ကြီးအတွက် အနှိုင်းမဲ့ ကျေးဇူးဆပ်ခြင်းအားဖြင့်သတိပဌာန် ၀ိပဿနာတရားများ ပွား
များအားထုတ်နိုင်အောင် တိုက်တွန်းအားပေး၊ ပို့ ဆောင်ကုသိုပြုနိုင်ခဲ့ ပြီ...
မိခင်ကြီးကိုယ်တိုင်ရဟန်းအမ ဖြစ်အောင်မိမိ ကိုယ်တိုင်ရဟန်းဘောင်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ ပေး
အနှိုင်းမဲ့ သာသနာတော်အတွက် အများကြီးမဟုတ်တောင် တစ်စုံတစ်ရာ ပွားများကျင့် ကြံ
အမြတ်ဆုံးသော အနှိုင်းမဲ့ ဓမ္မအလှူ ၊ လူမှုရေးအကူ...လူတစ်ဦးချင်းစီမှ၊ လူသားများစွာအ
ကျွန်တော့် အသက်အရွယ်နှင့် စာလျှင်....အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ ကျေနပ်ဖွယ်ရာ
သာသနာရေး၊ဘာသာရေး၊လောကီလောကုတ္တ နှစ်ဖြာသော ဗဟုသုတများစွာ သိမြင်ပြန့် 
သေချာတာကတော့ကျွန်တော်ဟာကမ္ဘာမြေကြီးအတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်မနေခဲ့ 
သာသနာတော်ထွန်းကားတဲ့ ခေတ်နဲ့ တွေ့ ခဲ့ ရတယ်...အကျင့် သီလ၊ ပညာဥာဏ်တွေနဲ့ 
ပြည့် စုံတဲ့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကို ဖူးတွေ့ ဆည်းကပ်ခဲ့ ရတယ်...( ဆရာတော်ဘုရား
ကြီးများကို ကိုယ်တိုင်ရော) ဓမ္မစာပေ၊ တရားအသံတော်များနှင့် ပါ ကြည်ညိုဆည်းကပ်နိုင်ခဲ့
မကောင်းမှုတွေပြုခဲ့ တာရှိပေမယ့် လည်း ငရဲကိုတိုက်ရိုက်၊သေချာပေါက်သွားနိုင်တဲ့ပဉ္စာ
နန္ဒိယ ကံ ( အမိ၊အဖ သတ်တဲ့ ကံ ၊ မြတ်စွာဘုရားကိုသွေးစိမ်းတည်စေတဲ့ ကံ ၊ သံဃာ သင်း
ခွဲတဲ့ ကံ ၊ နိယတမိစ္ဆာဒိဌိ ယူတဲ့ ကံ ) တွေ မှလွတ် တဲ့ အတွက် အင်မတန်မှဆိုးဝါးတဲ့ ဘ၀
ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ဖြေသိမ့် နိုင်တယ်...
အဲဒီအတွက် အနေမြတ်ခဲ့ တယ်...
မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်ကနေ စစ်မှန်တဲ့ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ 
တယ်၊ အစမထင်လည်ပတ်နေတဲ့ သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ ကင်းရာကင်းကြောင်းလမ်းစကောင်း
ကို စတင်ခြေလှမ်း ခဲ့ ရပြီ....
ကံလမ်းပေါ်လျှောက်လူတစ်ယောက် အဖြစ်မှသည် ဥာဏ်လမ်းပေါ်လျှောက် လူတစ်ယောက်
အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ ရပြီ...
အမြင်မတော်အမှားအယွင်းများရှိခဲ့ ယင်ခွင့် လွှတ်စေလိုပါတယ်...
ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ တရားတွေ့ ကြပါစေသော်ဝ်....
Posted by Unknown | at 5:08 AM |7comments
ဒူဘိုင်းမှ နာမည်ကျော် ဘလော့ ဂါမိတ်ဆွေ လျှိူ့ ဝှက်သောနှင်းက တက်ဂ်ပါတယ်...
ကမ္ဘာကြီးပျက်ခဲ့ မယ်ဆိုယင်....တဲ့ 
ဘလော့ ဂ်တွေပေါ်မှာတော့ သူများတွေပြောနေ၊ရေးနေကြတာတွေ့ ဖူးပါတယ်...
၂၀၁၂ မှာ ကမ္ဘာပျက်မယ်၊ ဘာဖြစ်မယ်၊ ညာဖြစ်မယ်နဲ့ .....
ဒါနဲ့ ကိုယ်ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာတရားကဒီအကြောင်းနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးဘယ်လို
များဟောထား၊ပြောထားတာတွေများရှိ သလဲလို့ လေ့ လာကြည့် လိုက်တော့ ဒီလို
ကမ္ဘာပျက်တာနဲ့ ပါတ်သက်တာလေးတွေတွေ့ ရလို့ဒီတက်ဂ်ထားတာလေးမပြောခင်ဗဟုသုတ
အခုလိုပဲ ကမ္ဘာကြီးပျက်တော့ မယ်တို့ ၊ ဘာတို့ ဆိုပြီးမဖြစ်သေးတာတွေဖြစ်တော့ မယ့် အ
ကြောင်းသတင်းစကားတွေကို တစ်ဦးစနှစ်ဦးစကနေ လူအများစုပေါင်းပြီးပြောဆိုကြတာကို
ကောလာဟလ လို့ ခေါ်ပါတယ်...
တစ်ကယ်အမှန်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အရာတွေရှိသလို ဟုတ်မလိုလိုနဲ့ ဖြစ်မလာတာတွေလည်း
ရှိသပေါ့ ...ဒါကအရပ်ထဲကကောလာဟလ ပေါ့ ...( အရပ်စကားနဲ့ ပြောယင်ကောလဟာလ
လို့ အများစုက ဆိုကြပါတယ်...)
မြတ်စွာဘုရားပွင့် ထွန်းပေါ်ပေါက်လာမည့်( ဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့် ကြံအားထုတ်မည့် သူ
ပေါ်ပေါက်လာမည့် ) ကောလာဟလ
(ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်ထဲက ) မင်္ဂလသုတ္တန်ပေါ်ပေါက်လာရန်အတွက် ကြိုတင်ပြီးဖြစ်ပေါ်သော
ဘယ်အရာကမင်္ဂလာရှိတယ်...စသည်ဖြင့် ပြောဆိုကြသော ကောလာဟလ
ကျင့် နိုင်ခဲ သော ဘုရားသာသနာတွင်၊ကျင့် နိုင်ခဲသော မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြုစေ
နိုင်သောအကျင့် တရား ကောလာဟလ
ဒီနေရာမှာတော့ကမ္ဘာပျက်မယ့် အကြောင်းမို့ကမ္ဘာကြီးတစ်ကယ်ပဲပျက်တော့ မည်လော...
ကမ္ဘာတစ်ခုဟာ ဘယ်လောက်ကြာကြာတည်တံ့ သလဲဆိုတာလေးကိုပဲ ဗဟုသုတအဖြစ်ပြန်
အခုလက်ရှိ ကမ္ဘာကို ဗုဒ္ဓတရားတော်များအရ ဘဒ္ဒ ကမ္ဘာလို့ ခေါ်ပါတယ်....
ဗုဒ္ဓဘုရားငါးဆူပွင့် မယ့် ကမ္ဘာပေါ့ ....
အခုထက်ထိ ဘုရားပေါင်းလေးဆူပွင့် ခဲ့ ၊ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ ပြီးတာမို့ နောက်ထပ် ဗုဒ္ဓဘုရား
တစ်ဆူ ( အရိမေတ္တိယျ ဘုရား ) ပွင့် ထွန်းပေါ်ပေါက်ဖို့ ကျန်ပါသေးတယ်...
အဲဒီအတွက် ဒီကမ္ဘာကြီးဟာလုံးဝ ကိုပျက်စီးသွားဖို့ မရှိပါ....
လူအမြောက်အများ သေကြေပျက်စီးမယ့်သဘာဝဘေးအန္တရယ်တွေ၊ စစ်ပွဲတွေ၊ ရောဂါဘေး
အန္တရာယ်တွေ၊ အငတ်ဘေးတွေတော့ ဖြစ်မှာပါ...သို့ သော် သက်ရှိလူသား၊တိရိစ္ဆာန်တွေ တစ်
ဦးတစ်ယောက်မျှမကျန်ရအောင် အလုံးစုံပျက်စီးခြင်းကတော့ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး...
ကျွန်တော့် အထင်တော့ လူတွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့် သီလတွေ အကြီးအကျယ်ချိူးဖောက်ကြတဲ့ အခါ၊
ကာမဂုဏ်အာရုံတွေကို အလွန်အမင်း၊အကြီးအကျယ် မှားမှားယွင်းယွင်းခံစားသုံးဆောင်ကြတဲ့
အခါ၊မေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပေက္ခာ စတဲ့ဗြဟ္မစို တရားတွေအကြီးအကျယ်ခေါင်းပါးလာတဲ့ 
အခါတွေမှာ လူတွေသံဝေဂတရားတွေရစေဖို့ ဒီလိုကောလာဟလ တွေပေါ်ပေါက်လာရတယ်
ကမ္ဘာပျက်မယ့် ကောလာဟလအကြောင်းလေး ပါဠိတော်ဘာသာပြန်ကတော့ ဒီလိုဆိုထားပါတယ်...
ကမ္ဘာကြီး ပျက်တော့မည်ဟု အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ဖြစ်ခြင်းကို ကပ္ပကောလာဟလဟူ၍ခေါ်ဆို၏။
ကမ္ဘာပျက်လုနီးလာသော အခါ မပျက်မီနှစ်ပေါင်းတသိန်းက ကြိုတင်၍ လောကဗျူဟာ အမည်ရှိ
သောကာမာဝစရနတ်တို့သည် နီမြန်းသောအဝတ်တို့ကို ဝတ်ဆင်ကြပြီးလျှင် ဆံပင်ကိုဖားယားချ
ကုန်၍ ငိုယိုသောမျက်နှာမှ မျက်ရည်တို့ကို သုတ်ကာသုတ်ကာအလွန်မသက်သာသော အသွင်အ
ပြင် အခြင်းအရာတို့ဖြင့် လူတို့သွားလာရာ ခရီးလမ်းတို့၌ လှည့်လည်ကြကုန်လျှက်---
ဤနှစ်မှစ၍နောက် အနှစ်တသိန်းလွန်သော အခါ၌ ဤကမ္ဘာလောကကြီးသည်ပျက်စီးတော့ပေမည်၊
မဟာသမုဒ္ဒရာ သည် ခန်းခြောက်တော့မည်၊မဟာသမုဒ္ဒရာသည်လည်းခြောက်ခန်းတော့မည်၊
ပထ၀ီမြေကြီးသည်၎င်း၊မြင်းမိုရ်တောင်မင်းသည် ၎င်း၊ဤအလုံးစုံတို့သည်(မီးဖျက်မည့်ကမ္ဘာဖြစ်လျှင်)
မီးလောင်၍ပျက်စီးကုန်လိမ့်မည်၊(ရေဖျက်မည့်ကမ္ဘာဖြစ်လျှင်)ရေလွှမ်းမိုး၍ ပျက်စီးကုန်လိမ့်မည်၊
(လေဖျက်မည့်ကမ္ဘာဖြစ်လျှင်)လေပြင်းလေကြမ်းတိုက်ခတ်၍ ပျက်စီးကုန်လိမ့်မည်၊မြင်းမိုရ် သမုဒ္ဒရာ
တို့၏ တည်ရာ ဤမဟာပထဝီမြေကြီးမှသည် ဗြဟ္မာ့ပြည်တိုင်အောင် ဤကမ္ဘာလောကကြီး ပျက်စီးလိမ့်မည်၊
သင်တို့ သည် မေတ္တာတရားကိုပွားများကြကုန်လော့၊ကရုဏာတရားကိုပွားများကြကုန်လော့၊မုဒိတာ
တရားကိုပွားများကြကုန်လော့၊ ဥပေက္ခာဗြဟ္မစိုရ် တရားကိုပွားများကြကုန်လော့။အမိ အဖတို့ကို
ရိုသေစွာ ပြုစုလုပ်ကြွေးကြကုန်လော့၊သက်ကြီးသူအို ရိုသေထိုက်သူတို့ကို ရိုသေကြကုန်လော့၊
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌ အစဉ်နှိုးကြားကြကုန်လော့၊မမေ့မလျော့ကြကုန်လင့်…. ဟူ၍ အနှံ့အပြား
လူအပေါင်းတို့ကြားသိလောက်အောင် ကြွေးကြော်ကြကုန်၏၊ဤသို့ကြွေးကြော်သည်ကို အကြောင်း
အစပြူ၍ ကမ္ဘာကြီးပျက်တော့မည်တဲ့…ကမ္ဘာကြီးပျက်တော့မည်တဲ့ ဟူ၍ လူအများစုရုံးကာ
နေရာအနှံ့အပြား၌ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ပြောဆိုကြခြင်းကို ကပ္ပကောလာဟလ
ကမ္ဘာပျက်မယ့် ကောလာဟလတော့ သိရပြီ....
ထိုအခါ ရဟန်းတစ်ပါးသည် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် မြတ်စွာ ဘုရားကို ရှိခိုးလျက်
တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်နေပြီးသော် မြတ်စွာဘုရားအား...
''အရှင်ဘုရား ကမ္ဘာသည် အဘယ်မျှလောက် ရှည်ပါသနည်း'' ဟု လျှောက်၏။
ရဟန်း ကမ္ဘာသည် ရှည်လျားလှ၏၊ ထိုကမ္ဘာကို ''ဤမျှသော နှစ်တို့'' ဟူ၍ လည်းကောင်း၊
''ဤမျှသော နှစ်အရာတို့'' ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ''ဤမျှသော နှစ်အထောင်တို့'' ဟူ၍
လည်းကောင်း၊ ''ဤမျှသော နှစ်အသိန်းတို့'' ဟူ၍ လည်းကောင်း ရေတွက်ခြင်းငှါ မလွယ်ဟု
အရှင်ဘုရား ဥပမာကို ပြုခြင်းငှါ တတ်ကောင်းပါ၏လောဟု လျှောက်ပြန်၏။ ''ရဟန်း
တတ်ကောင်း၏'' ဟု မြတ်စွာဘုရားသည် မိန့်တော်မူ၏။ ရဟန်း ဥပမာသော်ကား
မကွဲမပြတ်သော အခေါင်းမရှိသော တစ်ခဲနက်ဖြစ်သော ကျောက်တောင်ကြီးသည်
အလျားအားဖြင့် တစ်ယူဇနာ အနံအားဖြင့် တစ်ယူဇနာ အစောက်အားဖြင့်
တစ်ယူဇနာ ရှိ၏၊ ထို ကျောက်တောင်ကြီးကို ယောက်ျားသည် အနှစ်တစ်ရာ အနှစ်
တစ်ရာ လွန်သောအခါ၌ ကာသိတိုင်းဖြစ် အဝတ်ဖြင့် တစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်သာ
ပွတ်တိုက်ရာ၏၊ ရဟန်း ထိုကျောက်တောင်ကြီးသည် ဤလုံ့လဖြင့် လျင်စွာသာလျှင်
ကုန်ခြင်းဆုံးခြင်းသို့ ရောက်ရာ၏၊ ကမ္ဘာသည် ကုန်ခြင်းဆုံးခြင်းသို့ မရောက်ရာ။
ရဟန်း ကမ္ဘာသည် ဤသို့ ရှည်လှစွာ၏၊ ရဟန်း ဤသို့ ရှည်လျားလှသော ကမ္ဘာတို့၏
''တစ်ခုသောကမ္ဘာ'' ဟူ၍ မပြောဆိုအပ်၊ ''ကမ္ဘာတစ်ရာ'' ဟူ၍ မပြောဆိုအပ်၊ ''ကမ္ဘာ
တစ်ထောင်'' ဟူ၍ မပြောဆိုအပ်၊ ''ကမ္ဘာတစ်သိန်း'' ဟူ၍ မပြောဆိုအပ်။
ရဟန်း ဤသံသရာ၏အစကို မသိနိုင်၊ ရှေ့အစွန်းသည်။ပ။ ရဟန်းတို့ ဤသို့လျှင် အလုံးစုံသော
သင်္ခါရတို့၌ ငြီးငွေ့ခြင်းငှါ သင့်လှသည် သာလျှင်တည်း၊ တပ်ခြင်း ကင်းခြင်းငှါ သင့်လှသည်
သာလျှင်တည်း၊ လွတ်မြောက်ခြင်းငှါ သင့်လှသည် သာလျှင်တည်းဟု ဟောတော်မူ၏။ 128
ဒါကတော့ လက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့ အကြောင်းပေါ့ ....
ဒီလက်ရှိကမ္ဘာကြီးမတိုင်မီကလည်း တစ်ခြားကမ္ဘာတွေလည်းရှိခဲ့ သေးသလို၊ ဒီကမ္ဘာကြီးပျက်စီး
သည်ကိုပင်လျှင်၊ ဘ၀တွေအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်နေရသည်ကိုပင်လျှင် သံသရာဟုခေါ်ရသည် မဟုတ်ပါ
ကြုံကြိုက်လို့ တစ်ဆက်တည်းပဲ ကုန်လွန်ပျက်သုန်းခဲ့ ပြီးသောကမ္ဘာများအကြောင်းလဲ လောက
ထိုအခါ၌ များစွာကုန်သော ရဟန်းတို့သည် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်နေပြီးလျှင်။ပ။ မြတ်စွာဘုရားအား ''အသျှင်ဘုရား ရှေး၌ ကျော်လွန်ကုန်ပြီးသော ကမ္ဘာတို့သည် အဘယ်မျှလောက် များပါကုန်သနည်း''ဟု လျှောက်၏။ ရဟန်းတို့ ရှေး၌ ကျော်လွန်ကုန်ပြီးသော ကမ္ဘာတို့သည် များလှကုန်၏၊ ထိုလွန်ကုန်ပြီးသော ကမ္ဘာတို့ကို ''ဤမျှသော ကမ္ဘာတို့'' ဟူ၍ လည်း
ကောင်း၊ ''ဤမျှသော ကမ္ဘာအရာတို့''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''ဤမျှ သော ကမ္ဘာအထောင်တို့'' ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''ဤမျှသော ကမ္ဘာအသိန်း'' တို့ ဟူ၍ လည်းကောင်း ရေတွက် ခြင်းငှါ မလွယ် ဟု မိန့်တော်မူ၏။
အသျှင်ဘုရား ဥပမာကို ပြုခြင်းငှါ တတ်ကောင်းပါ၏လောဟု လျှောက်ပြန်၏။ ''ရဟန်းတို့
တတ်ကောင်း၏'' ဟု မြတ်စွာဘုရားသည် မိန့်တော်မူ၏။ ရဟန်းတို့ ဤသာသနာတော်၌
အနှစ် တစ်ရာ အသက်တမ်းရှိသည် ဖြစ်၍ အနှစ်တစ်ရာ အသက်ရှည်ကုန်သော တပည့်
'သာဝက' လေးယောက်တို့သည် နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း ကမ္ဘာကပ်ပေါင်းတစ်သိန်း ကမ္ဘာကပ်ပေါင်း
တစ်သိန်းကို အောက်မေ့ကုန်ရာ၏၊ ထိုသို့ အောက်မေ့စဉ် အနှစ်တစ်ရာ အသက်တမ်း ရှိသည်
ဖြစ်၍ အနှစ်တစ်ရာ အသက်ရှည်ကုန်သော ဤတပည့် 'သာဝက' လေးယောက်တို့သည်
အနှစ်တစ်ရာ ကို လွန်သောအခါ၌ သေခြင်းကို ပြုကုန်ရာ၏၊ ရဟန်းတို့ ထိုတပည့် 'သာဝက' လေးယောက်တို့သည် ကမ္ဘာတို့ကို ကုန်အောင် မအောင့်မေ့နိုင်သည်သာတည်း။
ရဟန်းတို့ ရှေး၌ ကျော်လွန်ကုန်ပြီးသော ကမ္ဘာတို့သည် ဤသို့ များလှကုန်၏၊ ထိုကမ္ဘာတို့ကို
''ဤမျှသော ကမ္ဘာတို့'' ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ''ဤမျှသော ကမ္ဘာ အရာတို့''ဟူ၍ လည်းကောင်း၊
''ဤမျှသော ကမ္ဘာအထောင်တို့'' ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ''ဤမျှသော ကမ္ဘာအသိန်းတို့'' ဟူ၍
လည်းကောင်း ရေတွက်ခြင်းငှါ မလွယ်ကုန်။
ကဲ...ဒါတွေကတော့ ကမ္ဘာကြီးပျက်မှာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဗဟုသုတတွေပဲပေါ့ ...
အထက်ပါဗဟုသုတများကို ဆရာလေးတစ်ပါးရဲ့ သုခကာမိဘလော့နဲ့ဆရာတော်
ဦးလောကနာထရဲ့ ဓမ္မစာမျက်နှာများ မှရယူပြီးပြန်လည်တင်ပြပါတယ်...
လောကသုတ၊ ဓမ္မသုတ များတိုးတက်ပွားများနိုင်ပါစေ...
Posted by Unknown | at 3:30 PM | 13 comments
အောက်ပါဓါတ်ပုံများတွင်ဖော်ပြထားသောနည်းဖြင့် ကုသလိုက်ပါက သင့် ရောဂါဝေဒနာများ
တရုတ်နိုင်ငံက နေမကောင်းဖြစ်သူကိုကုသပေးတဲ့ ၇ိုးရာဆေးကုသနည်းတစ်မျိူးပါတဲ့ ...
ရောဂါပိုးတော့ မသိ...လူကတော့ မသေ့ တစ်သေ ခံစားရမည်မှာ အသေအချာပင်...
မဟုတ်တရုတ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့တစ်ကယ်ကိုပဲလိုက်ဖက်ပါပေတယ်...
သူ့ လိုသာဆို လက်ရှိဆေးသိပ္ပပညာရှင်တွေ ထမင်းငတ်ကုန်မယ်...
တရုတ်တိုင်းရင်းသမားတော်ကြီး ဦးလူရွှီး...လူနာစောင့် မျှော်နေစဉ်....
ဆရာ့ ရဲ့ ကုချက်က ပလင်းခွံ၊ဘူးခွံတွေနဲ့ရောဂါပိုးတွေကို
ပလတ်စတစ်ဗူးခွံ၊ ပုလင်းခွံနဲ့ဝါးကျည်တောက်ပါမကျန် အခွံလွတ်မှန်သမျှအကုန်သုံးတဲ့ ...
အခွံလွတ် ဆေးနည်းပေါ့ ....
သုမနကျောမှာတော့ ဒဏ်ရာများနဲ့ ပေါ့ ....
လေဟာနယ်ပုလင်းလွတ်နဲ့ တင် မသက်သာသေးဘူးဆိုယင်...
ကျောပြင်ကို မီးတင်ပြီးတော့ ပါမီးရှို့ ပြီး ကုသပေးတယ်...
Posted by Unknown | at 1:45 AM |4comments
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဥတ္တရာပရာဒေ့ ရှ် ပြည်နယ်နှင့်မတ္တရာပရာဒေ့ ရှိ ပြည်နယ် တို့ တည်ရှိသော
Bundelkhand ဒေသကြီးတွင် မိုးခေါင်ရေရှားမှုကြောင့် စိုက်ပျိူးသီးနှံများမဖြစ်ထွန်းပဲ အကြွေး
များပြန်မဆပ်နိုင်သဖြင့် လယ်သမားများမှာ ကြံရာမရဖြစ်နေကြရသည်ဟုဆိုသည်...
ယခုကဲ့ သို့ ရာသီဥတုဆိုးဝါးပြီးစပါးဆန်ရေပြတ်လတ်သည့် နှစ်ကို ဆက်လက် အသက်ရှင်နိုင်ရန်
လယ်သများအများစုကတော့” ပိုက်ဆံဝါလား ” ဟု ဟင်ဒီဘာသာဖြင့် ငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်
၀သူများဟု အဓိပ္ပါယ်ရသူများထံ ချဉ်းကပ်ကြရ၊ ငွေတိုးချေးကြရလေသည်...( ပိုက်ဆံဆိုတဲ့ 
စကားဟာ ဟင်ဒီဘာသာကဆင်းသက်လာတာ အခုမှပဲ သိတော့ တယ်ဗျာ...)
အစိုးရထံမှာတရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ အဆိုပါ ငွေတိုးချေးစားသူတွေရဲ့ အတိုးနှုံးက
တော့ ကြောက်ခမန်းလိလိ များပြားပါတယ်လို့ လယ်သမားများကဆိုပါတယ်....
အတိုးတွေများလာပြီဆိုယင်တော့ငွေချေးတဲ့ သူဌေးတွေကပြန်ဆပ်ဖို့တောင်းဆိုပါတော့ တယ်...
အဲဒီအခါပြန်မဆပ်နိုင်တဲ့လယ်သမားတစ်ချိူ့ ကတော့ အဲဒီငွေတွေအတွက် တစ်သက်လုံး သူတို့ 
တစ်ချိူ့ ကတော့ မိုးကမရွာ၊ ရေကမရမို့ စိုက်ပျိူးထားတာတွေ မအောင်မြင်လို့ ငွေပြန်မဆပ်နိုင်တာ
ကြောင့်အကြွေးရှင်တွေတောင်း သမျှ ပေးရပါတယ်တဲ့ ...
အဆိုပါအကြွေးရှင်သူဌေးတောင်းတဲ့ အထဲမှာ လယ်သမားတွေရဲ့ ဇနီးမယားတွေပါ ပါဝင်ပါတယ်တဲ့ ....
ဟိုးတုံးကမြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်တွေအုပ်ချူပ်ခဲ့ စဉ်ကပြောခဲ့ ဖူးတဲ့ချစ်တီးကုလားက အကြွေးနဲ့ 
သိမ်းတယ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ အခုထက်ထိ အိန္ဒိယမှာ ရှိနေတုံးပါပဲ....
” အဲဒီလို လင်ကအကြွေးမဆပ်နိုင်လို့ မယားကို သိမ်းပိုက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်ဟာ အခုအထိတစ်ကယ်
ကိုရှိနေပါသေးတယ်...” လို့ အမည်မဖော်လိုသူ လယ်သမားတစ်ဦးရဲ့ ဇနီးကပြောပြပါတယ်....
သူမကို အကြွေးရှင်ချစ်တီးသူဌေးက သူမရဲ့ ယောကျာင်္းဆီကနေ ၀ယ်ယူခဲ့ တာ ( အကြွေးနဲ့ သိမ်း
ခဲ့ တာ ) ပါတဲ့ ...
ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြာအောင် အဲဒီ လူ ( ချစ်တီး ) ဟာသူမကို သူနဲ့ အတင်းအကြပ် အတူနေစေခဲ့ 
ပါတယ်...အဲဒီနောက်သူမရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို လူတွေသိသွားတဲ့ အခါမှာ သူမဟာရဲစခန်းကိုတိုင်
ကြားခဲ့ တဲ့ တိုင်ကြားချက်ကို ပြန်ရုပ်သိမ်းပြီး သူမရဲ့ ယောကျာင်္းကလည်း သူမကိုပြန်ခေါ်သွားခဲ့ 
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့အမျိူးသမီးတွေကို အနိုင်ကျင့် ခေါင်းပုံဖြတ်၊ အမြတ်ထုတ်ကြတာ အစဉ်
အဆက်ကိုဖြစ်နေခဲ့ ပါပြီလို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ လူမှုဘ၀ သုတေသနဗဟု ဌာနက ရန်ဂျနာကုမာရီ
မခံနိုင်လို့ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေထံကို တရားစွဲ ဆိုခဲ့ ယင်လည်း အဆိုပါအမျိူးသမီးတွေ
ကို အားပေးထောက်ခံသူက အနည်းငယ်ပဲရှိပါတယ်လို့ သူမက ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
In the region of Bundelkhand, spanning the two northern Indian states of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, drought, debt and desperation have pushed people to extremes. To survive the bad years, some farmers say they turn to the "Paisawalla" -- Hindi for the rich man who lends money. Farmers say the loans from these unofficial lenders usually come with very high interest.
When the interest mounts up, lenders demand payment. Some farmers work as bonded laborers foralifetime to pay off their debts. Others here say because of years of little rain and bad harvests they are forced to give money lenders whatever they ask for. Sometimes that includes their wives.
"It happens sometimes when somebody borrows money," saysafarmer's wife who did not want to be identified. She should know, considering what police say she told them. She saidarich man bought her from her husband. "He did buy me," she says. "That's why he told me he bought me." For 30 days she says the man forced her to live with him. When her case drew public attention, she retracted her police report and her husband took her back.
Ranjana Kumari with India's Centre for Social Research says the exploitation of women is common in the region. And, she says, there is little support for women in India who have the courage to fileacase with authorities.
Posted by Unknown | at 11:04 PM |3comments
Labels: news : cnn
၀ဋ်နှင့် ကြမ္မာမမှီပါခဲ့ ....
ကျွန်မတို့ အပြင်ကိုထွက်ခဲတယ်ရှင့် .....အပြင်ထွက်ရမှာကြောက်တယ်...
We don't go out much , we get nervous...
cojoined twins Ganga and Jamuna
ဆပ်ကပ်ပြပွဲဖြင့် ဝင်ငွေရှာရတယ် .....
Money-spinners ... sisters perform in circus act
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ရင်ခြင်းဆက် အမွှာညီအစ်မများဖြစ်သော ဂင်္ဂါနှင့် ယမုနာ ( မြစ်တွေကိုအမှီပြုပြီး
နာမည်ပေးထားတာ ) တို့ ဟာ သူမတို့ မိသားစု ဘ၀ရပ်တည်ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက် ပင့် ကူညီ
အစ်မများ၏ အထူးအဆန်းပြပွဲ အဖြစ်ရုံသွင်းပြသကာ ငွေရှာထောက်ပံ့ နေကြရပါတယ်...
ခေင်းနှစ်လုံး၊ ခြေထောက်သုံးချောင်း၊ လက်လေးဘက် တို့ ပါရှိတဲ့ အသက် ၃၉ နှစ် ရှိအမွှာညီ
အစ်မစုံတွဲဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အရှားပါးဆုံးသော ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာတွေ
အထူးအဆန်းအဖြစ် မြင်တွေ့ လိုသူတွေဟာ အဆိုပါအမွှာပူးညီအစ်မရဲ့အင်းဆက်ကောင်ကဲ့ သို့ 
တွားတွားသွားတာတွေ ပါဝင်တဲ့ငါးနာရီကြာစင်တင်ပွဲကို သူမတို့ ဇာတိဒေသမှာ ကျင်းပတဲ့ အုပ်
စုလိုက် အမြောက်အများ သွားရောက်ကြည့် ရှုကြပါတယ်...သူတို့ ညီအစ်မ ရရှိတဲ့ ကြေးကတော့ 
ပေါင်စတာလင် ၂၆ ( ၄၂ ဒေါ်လာ ) ဖြစ်ပါတယ်...
အဲဒီလိုတင်ဆက်ပြသလို့ရတဲ့ ငွေဟာ မိသားစုဝင်ပေါင်း ၂၂ ဦးရှိတဲ့ သူမတို့ မိသားစုကြီး အတွက်
တော့ လ၀က်စာ ( နှစ်ပါတ်စာ ) စားရိတ်သာဖြစ်ပါတယ်...
” ကျွန်မတို့ ကို အထူးအဆန်းတွေဆိုပြီး လူတွေက စိတ်ဝင်တစ်စားလာကြည့် ကြတာပါ...” လို့ 
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အနောက်ဘင်္ဂေါနယ်မှာ သူတို့ နှစ်ဦးကိုမွေးဖွားခဲ့ တုံးက အရပ်လက်သည်နှစ်ယောက်
ဟာ အံ့ သြထိတ်လန့် ပြီး သတိလစ်လဲကျသွားခဲ့ ကြပါတယ်တဲ့ ....
၄င်းနောက် ကလေးမလေးနှစ်ဦးဟာ ခါးရိုးပိုင်းမှာဆက်နေကြပြီး ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကတော့ပုံ
မှန်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အစိတ်အပိုင်း အသီးသီးဖြစ်ပြီး၊ ခြေထောက်သုံးချောင်းမှာ၊ တစ်ချောင်းသာ
သူတို့ ရဲ့ အခြားခြေထောက်နှစ်ချောင်းကတော့တစ်ခုအဖြစ်ပူးကပ်နေပြီး ခြေချောင်းကလေးတွေ
”ကျွန်မတို့ အပြင်ကိုသိပ်မထွက်ကြပါဘူး...အပြင်သွားရမှာကြောက်တယ်...” လို့ဂင်္ဂါ ကပြောပါ
သူတို့ ညီအစ်မတွေရဲ့ နောက်ထပ် စိုးရွံ့ တဲ့ အရာကတော့သူတို့ ကို တစ်ဦးစီဖြစ်အောင် ခွဲစိတ်
လိုက်ကြမှာကိုပါပဲ...တစ်ကယ်လို့ ခွဲစိတ်ခဲ့ ယင် အသက်အန္တရယ်ရှိတယ်လို့ ဆရာဝန်တွေက
ဒါပေမယ့်ခန္ဓာကိုယ်ချင်းဆက် အမွှာများခွဲစိတ်ကုသရာမှာကျွမ်းကျင်သူ ဆရာဝန်ကြီး ဂျိမ်းစတိမ်း
ကတော့သူတို့ ကိုခွဲစိတ်ယင် အသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်လို့မကြာမှီမှာထုတ်လွှင့် တော့ မယ့်ဒစ်စ
ကာဗာရီ ရုပ်သံလိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ဒါပေမယ့်သူတို့ ညီအစ်မကတော့တစ်သက်မခွဲပဲ အခုလိုပဲအတူတူနေသွားကြဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ ကြ
” ဘုရားက ကျွန်မတို့ ကို ဒီိလိုနေဖို့ ဖန်ဆင်းခဲ့ တာပါ....” လို့သူရဲ့ ညီမကိုဖက်ပြီး ဂင်္ဂါကပြောခဲ့ 
ကျွန်တော်ကတော့ဝဋ်ကြွေးလို့ သာထင်မိပါတယ်....
CONJOINED twins Ganga and Jamuna Mondal support their family withabizarre circus act - billed as The Spider Sisters.
The 39-year-old pair, who have two heads, three legs and four arms, are among the rarest types of twins in the world.
And curious spectators flock to see them crawl insect-like across the stage in their native India for five hoursanight - in return for just £26 in wages.
The cash is enough to feed their extended family of 22 forafortnight.
Jamuna says: "People are drawn to us. They think we are strange."
When the twins were born in West Bengal, two shocked midwives fainted.
Doctors found the girls were joined at the pelvis, but each hasanormal upper body and one functioning leg.
Their other two legs are fused intoasingle limb with nine toes.Ganga says: "We don't go out much as we get nervous."
Another of the sisters' fears is being separated - after doctors warned it could be fatal.
Posted by Unknown | at 12:52 AM |4comments
ထိုင်ဝမ် နိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်တစ်ခုဟာ တက္ကသိုလ်ဝင်ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများအတွက် ညစ်ညမ်း
ရုပ်ရှင်ခေါ် အပြာကားများကို ဘယ်လိုကြည့် ရှုခံစားပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သုံးသပ် သုတေသနလုပ်တဲ့ 
အကြောင်းအရာဘာသာရပ်တစ်ခု ဖန်တီးဖွင့် လှစ်သင်ကြားပို့ ချမှု စတင်ခဲ့ ပါတယ်တဲ့ ....
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ Providence တက္ကသိုလ်ရဲ့ လူထုဆက်သွယ်ရေးဌာနမှ ယခုနှစ် စာသင်နှစ် အတွက်
အဆိုပါ ဘာသာရပ် သင်တန်းကို ဖွင့် လှစ်ခဲ့ တာဖြစ်ကြောင်း United Daily သတင်းဌာနက သတင်း
ပေးပို့ ခဲ့ ပါတယ်...
အဆိုပါဘာသာရပ်သင်တန်းကို အောင်မြင်ဖို့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်
အပြာကားရဲ့ထုတ်နှုတ်ပြသချက်တစ်ခုကို ကြည့် ရှုခံစားသူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ ပြန်မှုကို ပညာ
ရပ်ရှုထောင့် ကနေ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့ ဆယ့် ငါးမိနစ်စာ စာတမ်းတင်ဆက်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးရမှာ
စိတ်ပူပန်ကြောင့် ကြမှုဖြစ်နေတဲ့အမည်မဖော်လိုသူကျောင်းသားတစ်ဦးက ” တစ်ကယ်လို့ ဘာ
သာရပ်မှာဂုဏ်ထူးမှတ်ရခဲ့ ယင် မိဘတွေကို ဘယ်လိုရှင်းပြရ မလဲတောင် မသိပါဘူး...” လို့ မှတ်
စိတ်ကြိုက် ဘာသာရပ်ဖြစ်တဲ့ ထိုသင်တန်းအတွက်တက် ရောက်ရန်ဝင်ခွင့် စာရင်းသွင်းရာမှာ
အကယ်၍ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်၊ ပြကွင်း၊ ပြကွက်တွေဟာ သိပ်ကိုပီပြင်၊ ထင်ရှားလွန်းနေယင်
ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စာသင်ခန်းထဲကနေ အပြင်ကိုထွက်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘော
တူကြောင်း စာရွက်တစ်ရွက်ကိုလည်း လက်မှတ်ထိုးကြရပါတယ်...
အဆိုပါဘာသာရပ် လက်ထောက်ပါမောက္ခ ဆရာမ Chen Mingmei ကတော့ သင်တန်းစဖွင့် 
ကတည်းက အခုအချိန်အထိ သင်ကြားပြသတဲ့ ရုပ်ရှင်ရဲ့ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းပြကွက်တွေကို
ရောက်ယင် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတစ်ချိူ့ မျက်လုံးများ ခေတ္တခဏ ဖုံးအုပ်ထားတာက လွဲလို့ 
စာသင်ခန်းကနေ ထွက်သွားတာတစ်ယောက်မှမရှိသေးပါဘူး လို့ ဆိုပါတယ်...( စိတ်ဝင်စား
အဲဒီဘာသာရပ်အတွက်လျှောက်ထားတက်ရောက်သူပေါင်း ၅၀ ကျော်ရှိခဲ့ ပြီး သူတို့ အားလုံးနီး
ပါးက ယခင်ကတည်းက အဲဒီလို ရုပ်ရှင်ကားတွေကြည့် ခဲ့ ဖူးပါတယ်လို့ ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ ကြပါ
ဘာတွေများသင်ကြားရမှာပါလိမ့်ဆိုတဲ့ စူးစမ်းလေ့ လာချင်စိတ်က အဆိုပါ ဘာသာရပ်သင်တန်း
ကိုတက်ရောက်စေရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီး၊ အများစုက သူတို့ ဒီဘာသာရပ်ကိုသင်
ကြားလေ့ လာနေတာ သူတို့ မိဘတွေ မသိကြသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်...
အခြားကျောင်းသားတစ်ယောက်ကလည်း ” သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေရဲ့ အမှတ်စာရင်းတွေ
ထွက်လို့ စာတိုက်ကနေပို့ လိုက်ယင် မိဘတွေ တွေ့ သွားမှာ တစ်ကယ်စိုးရိမ်မိပါတယ်.......
ရမှတ်တွေက ကောင်းနေယင်ဘယ်လိုပြောပြရမှန်းတောင် မသိပါဘူး....” လို့ ဝန်ခံပြောဆို
” အဲဒီ ဘာသာမှာတစ်ကယ်လို့စာမေးပွဲကျ ခဲ့ ယင်တော့အဲဒီကားတွေကိုများများကြည့် ခွင့် 
ပေးဖို့ အိမ်ကိုပြောနိုင်ပြီပေါ့ ....” လို့ လည်း သူကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အဲဒီသင်တန်းတက်ချင်ရင်တော့ထိုင်ဝမ်က ဆရာမ မကိကီ ဆီသာစာရင်းပေးသွင်း
ကြပါရန်....( ဟဲ....ဟဲ...နောက်တာနော်....စိတ်ဆိုးနဲ့ ....)
ရွှေပြည်ကြီးမှာများဖွင့် လိုက်ယင် အဲဒီလိုသင်တန်းမျိူးကို တက်လိုက်ကြမယ့် ကျောင်းသားတွေ...
Another student admitted: "I am really worried my parents will see the score report when it is mailed home. I won?t know what to say if I getahigh score
Posted by Unknown | at 1:24 AM |7comments
Labels: news : annanova
သတ်ပုံမှားတဲ့ အဖြစ်အပျက်များ ( ၂ )
ထိတော့ ထိတယ်...ဒါပေမယ့် ကွယ်....
မှားတဲ့ အခါလည်းမှားပေမပေါ့ ....
သြော် cctv တဲ့ လားကွယ်...
ဗျိူ့ ...မုဆိုး !!!
အကောင်ငယ်ပေမယ့် ...သူ့ ကိုတော့ ကြောက်ရတယ်နော်....
Posted by Unknown | at 10:54 AM |5comments
Labels: photos fun
Thai festival isahole lotta fun
ကျွန်တော်တို့ ရွှေပြည်ကြီးတွင် အိန္ဒိယကုလား၊ဟိန္ဒူလူမျိူးများမီးနင်းသည်ကိုတွေ့ ဖူးကြပေမည်...
မီးမနင်းမှီ၊၄င်းတို့ ၏ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ အပြား သံချွန်အရှည်များဖြင့် ထိုးစိုက်ပြီးအလှဆင်ကာ လှည့် 
ယခုထိုင်းနိုင်ငံ၊ဖူးခက်မြို့ တွင်နှစ်စဉ်ဆယ်ရက်ကြာသတ်သတ်လွတ်ပွဲတော်တွင်တော့ 
မီးမနင်းပေမယ့်အဓိဌာန်ဝင်သည့် သူများ၏မျက်နှာတွင် သေနတ်များ၊ ဓါးများနှင့် ချွန်ထက်
သောအရာဝတ္တုများအပါအ၀င် နာနတ်သီး၏အရိုးများကိုပင်ထိုးဖောက်ကာပါဝင်ဆင်နွှဲ ကြ
ဆယ်ရက်ကြာကျင်းပတဲ့ ထိုပွဲတော်မှာ ပါဝင်သူများဟာလမ်းပေါင်း ကိုးလမ်းကိုအဆိုပါ ထိုး
ဖောက်ထားသော လက်နက်ကိရိယာများဖြင့်လှည့် လည်လေ့ ရှိကြသည် ...၄င်းတို့ ကထို
သို့ ပြုလုပ်သည်မှာ အကုသိုလ်များ၊ရောဂါဘယများကင်းဝေစေသောကြောင့် ဟူ၏...
အဘယ်အရာကို ကင်းစင်စေသည်တော့ မသိ၊ အသုံးပြုသည့် ဓား၊လှံ သံချွန်များတွင် သံချေး
မတက်စေရန်တော့မျှော်လင့် ရပေသည်...
ကံအကျိူးပေးအလျှောက်၎င်းတို့ ပိုင်ဆိုင်၊သက်ဆိုင်ရာနေရာဒေသတွင်တော့ ကမ္မဇသိဒ္ဓိကြောင့် 
ထိုကဲ့ သို့ စွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း၊ အဆိုပါ နောက်ကွယ်မှမမြင်ရသော အောက်အဆင့် နတ်
စိမ်းများကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူများအနေဖြင့် အခိုက်အတန့် အားဖြင့် အကြောင်းအားလျော်စွာ ရောဂါတစ်ချိူ့ တစ်လေ ပျောက်ကင်းမည်၊ စိတ်ကူးအကြံအစည်တစ်ချိူ့ အောင်မြင်ကောင်းအောင်
သေချိန်တန်ကျလျှင်တော့ သေကြရသည်သာ၊နာချိန်ကျလျှင်တော့ နာရသည်သာ...
မည်သူမျှလဲ ထိုထိုပုဂ္ဂိုလ်များ မ စ စောင့် ရှောက်သောကြောင့် ဖူးခက်၏အချမ်းသာအကြွယ်ဝ
သံသရာဘေးမှလွတ်မည့် အရေးကား ပို၍ပင်ဝေးသေးတော့ သည်...
ထူးတိုင်းလည်းအားကိုးရန်မသင့် ၊ဆန်းတိုင်းလည်းမှီခိုဖို့ မထိုက်ပေ...
ဘာပဲပြောပြော၊ရွှေပြည်ကြီးကမီးနင်းတဲ့ ကုလားများကိုတော့ဖူးခက်ကတရုတ်များက
FORGET Download Festival, this is where the heavy metal's really at.
At the annual Vegetarian Festival in Phuket island, Thailand, guns, knives, sharp objects and even pineapples are shunted through piercings in local's faces.
The ten day freak-fest involves nine street processions and is all in aid of cleansing the body.
Cleansing? We just hope they sterilised that rifle.
သေနတ်နှစ်လက်နဲ့အစိမ်းပူးတဲ့ သူ....
Feeling ropey ... man with rope through face
ဒါကတော့ ပွဲသိမ်းပဲ....နာနာသီးကို အရိုးအရင်းကနေထိုးထွင်းထားတာ...
Totally tropical face....boy with pineapple...
Nife to see you....boy with knives through cheeks...
အရှင်လတ်လတ် ပြိတ္တာငရဲ ကျနေလေသလား...
Lip disservice.....painful lip rings....
လှည့် လည်ကာနွှဲပျော်....ယုံကြည်သူတို့ ရဲ့ ပွဲတော်...
Pierce of the action....locals on parade....
Needleahand here....a woman enjoys the event....
Oh my gash.....Metal shards through mouth...
Posted by Unknown | at 12:33 PM |4comments
Drug Money. $205 million in cash!
မော်စကိုမြို့ တော်ဝန်ရဲ့ အကြံ
၀ါးစားလို့ ရတဲ့ ပန်းကန်ပြားဆိုပဲ....
အစိ န္တေ ယျ လေးပါး
Pampered pooch hotel
Girl chops off tongue to get the right groom
အမျိူးသမီးများအတွက်တစ်ခါသုံးအပေါ့ အပါးစွန့် အိတ်...
Till Shoes do Us Part....
ရထားပေါ်ကပြုတ်ကျတဲ့ မွေးကင်းစကလေး၊ အံ့ သြဖွယ်အသက်ရှင်
” ၀ ” တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘာသာပြန်....
လောကကြီးမှာ ဒီလိုငကြောင် ၊ အရူးများလည်းရှိပေသေးသည...
၀က်ကလေးတွေချစ်စရာ.... အိမ်မှာမွေးချင်စရာ... Tiny ...
အကုန်အစုံစားတဲ့ သူဆိုပဲဗျာ..... Man Who Can Eat A...
ဗြိတိန် က Romantic ဘိုးဘိုး....
နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့် မြင့် ဇိမ်ခံရွက်လှေ....
The suburban snake charmer: Grandmother fills her ...
Mayor won't stop begging
Eggscruciating! Roberta the hen dies after laying ...